Malunga nathi-I-Wuxi Maxwell I-automation Technology Co, Ltd.
Inkampani yethu isebenza abasebenzi abangaphezu kwama-80, uninzi lwabasebenzi banamava angaphezu kweminyaka eli-15 kule ndawo. Ngomzamo wabasebenzi bethu bonke, siye saba ngumenzi omkhulu nge-ISO9001: isiqinisekiso sika-2000. Inkampani izame ngokuqhubekayo ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokungenisa izixhobo zekhnoloji ephezulu ezivela eJamani. Umthamo wethu wokuvelisa unyaka nonyaka ngu-800+ iiseti zoomatshini.
Oomatshini bethu sele bathunyelwe eIndonesia, Singapore, France, Germany, Libya, South Africa, Australia, Melika, Canada, Ecuador, Venezuela, Brazil, Russia nakwamanye amazwe nakwimimandla.
Inkampani yethu ithembisa "amaxabiso afanelekileyo, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neyona nto intle emva kokuthengisa" njenge tenet yethu. Sinethemba lokusebenzisana nabathengi abaninzi malunga nophuhliso kunye nezibonelelo. Siyakwamkela ukunxibelelana kwabaxumi kunye nokundwendwela kwakho kumzi-mveliso.